Shiinaha kartoo maqaar kartoo-saareyaasha bac, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Bacda duffle Bacda duffle > Bacda duffle maqaar
Bacda duffel maqaarka
1. Bacda duffel maqaarka details
(1) Bacdan duffel maqaarka ah waxay ka samaysan tahay maqaar macmal ah.
(2) Kabo gooni ah iyo Waxyaabaha la masaxo: Bacdan jimicsiga oo leh qol kabo ayaa hawo kala soocaya si ay u kala soocaan kabaha iyo qalabka wasakhda ah ee ka nadiifka ah waxyaabaha nadiifka ah.Waxaa sidoo kale jira bac dheeraad ah oo aan biyuhu xirin oo lagu keydiyo waxyaabaha qoyan, gaar ahaan tuwaallo qoyan ama jeebadaha dharka lagu maydho, taas oo ah aad ugu habboon oo si fudud loo nadiifiyo.
(3) Ku habboon jimicsiga ama nashaadaadka isboortiga: Boorsadan waxaa loo isticmaali karaa jimicsiyo, isboorti iyo waxqabadyo dabaal ah, iyadoo leh qol ku filan oo lagu xareeyo kabaha, dharka lagu dabaasho, sabeynta iyo bambooyin. waxaa jira jeebado badan oo wax ku ool ah, sidaa darteed waxaan si fudud uga furi karnaa taleefannada gacanta, furayaasha, boorsooyin iyo waxyaabo kale oo qiimo yar. Waxyaabaha ku jira boorsadani waa mid aad u fudud oo xoog badan.
(4) Ku fiican safarka: Waxaad u qaadan kartaa boorsadan meel kasta adigoon ka walwalayn inaad uga tagto booska boorsada.Waxay ku imaaneysaa suunka garbaha (oo leh garabka garbaha), gacantuna waxay leedahay barkimo jilicsan oo dusha sare ee boorsada ah si ay si fudud wax ugu qaaddo. cabirkaani wuxuu ku habboon yahay diyaaradaha, safarka, iyo boorsooyinka.Waxaa jira dhowr qaybood oo kala go 'ah, way fududahay in gudaha la soo galo si loo abaabulo ama loo soo qaado waxyaabaha la keydiyay. fududahay in la isticmaalo qalabka safarka.
(5) Adkaysigu wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa aqbalaada go'aamada kama dambeysta ah Waa wax la fahmi karo in la raadsado boorsooyin la isticmaali karo waqti dheer. Qoyaanka bacaha, dhanka kale, waa kuwo aad u adkeysi badan.Hubi in dhar kasta oo aad doorato gebi ahaanba la dhaqi karo oo sahlan in la ilaaliyo.Waa inuu u oggolaadaa bacda maqaarka maqaarka inuu haysto qaabkiisii ​​hore waqti dheer.
(6) waara: Maqaar tayo sare leh oo leh naylon adag, sidaa darteed waligood kama jeexjeexayaan dusha sare, waxaan u adeegsanaa jiinyeyaal bir ah oo tayo sare leh jeeb walba, sidaa darteed waligaa ma dareemi doontid dhibaatooyinka jiinyeerka Waxaan diiradda saareynaa faahfaahin kasta si aan u sameyno bacda maqaarka oo dhan oo tayo sare leh.
(7) Iftiin iyo raaxo: bac aad u fudud oo fudud, oo aan ahayn naqshad aad u tiro badan. Xadhko la isku hagaajin karo, si aad ugu dhejiso dhererkaaga, ama waad iska bixin kartaa oo kaliya isticmaal xarkaha gacanta lagu hayo, iyo suufka dul saaran xarkaha ayaa ka dhigaya kuwo raaxo leh inay xirtaan iyagoon qoorta kaa dhaawicin.
(8) Waxaa muhiim ah in la go'aamiyo nooca iyo suumanka kugu habboon adiga, caadi ahaan, labada gacmood ee dusha sare ee boorsada ayaa si fiican u shaqeynaya. Boorsooyin u eg-boorso oo leh laba garbood oo garabka ayaa sidoo kale la heli karaa.Haddii boorsadaadu culays saareyso garbahaaga, waxaa fiican inaad doorato boorso maqaar oo jidhka ka samaysan oo jidhka dhinac u jiidaya halkii aad hal garab oo keliya isku xoqi lahayd. Boorsooyinka iskutallaabtu waxay dul fadhiistaan ​​miskahaaga si loo yareeyo taabashada jirka waxayna ku siinayaan fursad fiican inaad si dhaqso leh u lumiso kuleylka. culays aan loo baahnayn oo saaran garbahaaga.
2. Bacda duffel maqaarka product parameters (specifications)
3. Maxaa La Tix Galiyaa Kahor Intaadan Iibsan Dambiisha Dheecaanka Haragga ah?
(1) Haddii aad qorsheyneyso inaad iibsato boorso maqaar oo maqaar leh oo leh qol kabo ah, waxaad filaysaa inay sii socon doonto in ka badan toddobaad. Bacaha qaarkood waxay u muuqdaan kuwo qurxoon dibedda, laakiin waxay kuxirantahay maaddada, si fudud ayey u kala bixi karaan ama u jeexi karaan. Waxaad ubaahantahay boorso adkeysi leh oo socon doonta jimicsiyo badan ama safarada dhamaadka usbuuca, sax? Gaar ahaan, boorsooyinka laga sameeyay naylonka aan xabada karin waxay leeyihiin nolol dheer, markaa nasiib wacan hadii aad jeexdo iyaga! Haddii aad raadineyso alaab muddo dheer soconeysa, nylon xaqiiqdii waa doorasho fiican, markaa ka taxaddar markaad wax iibsaneyso.
(2) Maaddada boorsada maqaarka maqaarku way ka muhiimsan tahay sidaad u malaynayso. Maaddadu waxay go'aamineysaa oo keliya sida ay u nadiifsan tahay bacda, laakiin (ka sii muhiimsan) sida ay u sii waaraneyso. Boorsada maqaarka ugu adag ee maqaarka waxaa laga sameeyaa naylon ballistic iyo dhar dahaaray oo xitaa ka sii xoog badan leh tolmo adag iyo xarkaha taageerada adag.
(3) Bacda duffel maqaarkas are a great way to carry items with you, whether you're traveling or just going to the gym.Suitcases are nice, but because of their sturdy shell, they don't hold much, and they won't hold them anywhere, anytime.Thanks to leather duffel bags, that's not a problem.The suitcase is soft, so it can pack more things and fit into a variety of Spaces.In addition, the handles on the suitcases make them easy to carry.
(4) Waxaad sidoo kale ubaahantahay shandad maqaar fudud oo nadiif ah oo dhidid ah, dhidid, sidaa darteed waxaa ugufiican in loo diyaar garoobo. Iibsashada boorsada maqaarka marwada maqaarka oo leh qol kabo waa wax fiican oo quruxsan ilaa ay qasan tahay. Hubso inaad soo iibso bacaha si fudud loo tirtiri karo loona nadiifin karo biyo iyo saabuun fudud.
(5) Qaar ka mid ah boorsooyinka maqaarka maqaarku way sii weynaan karaan oo ay u dhowdahay wax aan macquul ahayn in la qaado maxaa yeelay horay ayaad u buuxsantay. Tani waxay xitaa u horseedi kartaa dhaawacyo dhabarka ah, taas oo aan ahayn waxa aad rabto. inkasta oo giraangiradu ay ku darayaan mugga shandadaada, waa u qalantaa mugga dheeriga ah haddii aad qorsheyneyso inaad alaab culus qaado.
(6) Kahor intaadan go'aansan inaad mid iibsato, fadlan tixgeli qodobo kala duwan, sida ujeedada, helitaanka, adkeysiga, moodada, qiimaha iyo tayada boorsada.Haadi astaamaha aasaasiga ah sida awooda, nidaamka xiritaanka iyo xirmooyinka.
(7) Guud ahaan, waxaa jira arrimo badan oo ay tahay in laga fiirsado marka la dooranayo boorsada maqaarka. boorsada aad jeceshahay!
(8) Bacaha maqaarka maqaarka ee waaweyn ayaa qaadi kara in ka badan 155 litir, oo u dhiganta waxyaabo badan.Sidaa darteed haddii aad u baahato boorso qaadi kara daloollo badan oo duleel ah, soo iibso boorso maqaar weyn oo maqaar ah. jimicsiga ama jimicsi deg deg ah habeenkii, waxaad isticmaali kartaa boorso maqaar yar oo maqaar ah si aad ugu kaydiso waxyaabaha aad ugu baahan tahay jimicsiga ama habeenkii.
5. Baakadaha iyo gaarsiinta bacaha jir dhiska
Calaamadaha kulul: Bacda maqaarka maqaarka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka